တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: ကွန်ပျူတာနဲ့ လေကြောင်းတိုက်ပွဲ ကစားရတဲ့ Air Strike Game အလန်း. Air Assault
ကွန်ပျူတာနဲ့ လေကြောင်းတိုက်ပွဲ ကစားရတဲ့ Air Strike Game အလန်း. Air Assault
Air Strike ကို ကစားဖူးကြမှာပါ.. တော်တော် စွဲမက်စရာကောင်းတယ်.. သဲထိတ်ရင်ဖိုပဲလေ.. ဒီ Game က အရင် Air Strike game နဲ့သိပ်မကွာဘူးဗျ.. ဒါပေမယ့် graphics ကတော့ အတော်ကွာတယ်.. အရင် game နဲ့စာရင်တော့ ကစားရတာ မိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျ.. 21.7 Mb ပဲရှိပါတယ်...သူ့ဆိုဒ်ထဲကဖော်ပြ ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလဲအောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်.. အမည်က Air Assault ပါ..
Take to the skies again with Air Assault 2, the intense sequel to the action hit that pits you againstadetermined enemy over the desert, the sea, andavast industrial complex. Featuring more than 100 unique enemy units, an exciting storyline, and some of the most amazing 3D graphics you've ever seen, AirStrike2will keep you glued to your seat for hours. What are you waitingfor, Pilot? The world is counting on you!